Halatra tuk tuk Lehilahy 2 voasambotra tany Toamasina
Lehilahy miisa roa no voasambotry ny polisy miasa amin'ny boriborintany voalohany ao Toamasina noho ny fahaverezana Tuk tuk.
Nanokatra fanadihadihana avy hatrany ny polisy nanoloana izany. Ny sabotsy 09 mey maraina vao mangiran-dratsy nandritra ny fisafoana dia tra-tehak'ireo polisy tamin'izany teo Valpinson ity lehilahy mpangalatra ity niaraka tamin'ilay "tuk tuk" ka nentina namonjy ny birao avy hatrany natao famotorana. Fantatra nandritra ny fanadihadihana natao tamin'ity mpangalatra ity fa efa niasa nanao "chauffeur" tamin'ilay tompona "tuk tuk" nametraka fitoriana ihany izy taloha. Nolazainy tamin'izany ihany koa fa nanampy azy tamin'ny halatra ihany koa ilay lehilahy mpiambina tao amin'ilay toerana nipetrahan'ilay "tuk tuk" ary efa nosamborin'ny polisy ny andron'io ihany.